မှတ်မှတ်ရရ အလယ်တန်းကျောင်းသား ဘဝ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မှတ်မှတ်ရရ အလယ်တန်းကျောင်းသား ဘဝ
မှတ်မှတ်ရရ အလယ်တန်းကျောင်းသား ဘဝ
Posted by Paing Lay on Jul 11, 2014 in Aha! Jokes, Satire, My Dear Diary |7comments
အနော် 7တန်းကျောင်းသားဘဝကပေါ့ဂျာ။ တကယ့်ကို အမှတ်ရလေးပါ။ အဲဒီတုန်းက အနော်တို့ နေတဲ့ ကျောင်းဆောင်က အထပ်မြင့် တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဗျ။ အထပ်မြင့်ဆိုပေမယ့် ပုံစံက ခြေတံရှည်ဗျ။ ဆောက်ပေးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အိုင်ဒီယာကို အထူးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အောက်ထပ်မှာက ဖုန် နဲ့ အမှိုက်တွေရယ် ကျောင်းမှာ လိုအပ်ရင်အုတ်တံတိုင်းနဲ့ စည်းရိုးတွေ ထုံးသုတ်ဖို့ထားတဲ့ ထုံးပုံရယ် ဒါပဲရှိတယ်။ အဲဒီအောက်မှာပဲ အနော်တို့က မုန့်စားဆင်းချိန်ရယ်၊ ဂေါ်လီရိုက်ချိန်၊ ကာယအချိန် နဲ့ ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတဲ့ သောကြာနေ့တွေမှာပေါ့ ကျောင်းအုတ်လှေကားကို ကာဗာလုပ်ပြီး ဖဲခိုးရိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အနော်တို့ နေ့လည်ပိုင်းကို ကျောင်းလစ်ပြီး ဗွီဒီယိုရုံ အနောက်မှာ ကြည့်ဖူးတဲ့ အပြာကားအကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးကြတယ်။ သူကြည့်ဖူးတဲ့ ကားက ဘယ်လို ငါကြည့်ဖူးတဲ့ ကားကဘယ်လိုပေါ့။ ပြီးတော့ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့အပြင် သူ့မှာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖွင့်လှစ်ပြသကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ခါတစ်ခါကျရင် အပေါ်ကိုလည်း ခေါင်းမော့ပြီး ကြည့်ရလို့ လူလည်း ခေါင်းအကြောသေရာက မသိတဲ့လူမြင်ရင် တလောကလုံး သူ့လုပ်စာ ထိုင်စားနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်တော့မယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အနော်တို့ 7တန်းတက်တဲ့ နှစ်မှာပဲ ကျောင်းအုပ်ပြောင်းတော့ ထွက်လာတဲ့ စည်းကမ်းက 7တန်းက စလို့ ပုဆိုး နဲ့ ထဘီ(အဖြူအစိမ်း)သာဝတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းပါ။ ဒါပေမယ့် စတိုင်အရမ်းထွားလှတဲ့ အနော်တို့ A တန်းကတော့ ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင် ပိုဆိုးကို တိုတိုဝတ် လွယ်အိတ်ကို ကျော်သူ့ထုံးထုံးပြီး လွယ်။ မိန်းကလေးတွေဆိုရင် အထက်ဆင်ထဘီတွေ မဝတ်ဘဲ စကတ်ထဘီတွေပဲ ဝတ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ အနော်တို့ အောက်က ပျဉ်ပြားကြားထဲကနေ ချွေးစေးပြန်ပြီး ချောင်းရတာအမော။ ပြီးတော့ ဘယ်ကောင်မလေးက ပင်တီကို ဘယ်အရောင်လေးဝတ်ထားတာ ဘာညာဆိုပြီး လောင်းကြေးဖွင့်ပြီးတောင်ချကြသေးသဗျာ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် အနော်တို့ စိတ်ကအရမ်းဆာလာပြီဆိုတာနဲ့ ကျောင်းမှာ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်သယောင်လုပ်ကြတယ်။ အနော်တို့ အတန်းက ကောင်မလေးတွေကလည်း အတိုင်အတော အရမ်းထူတာဆိုတော့ ဆရာမ အဆက်ဆက် ဒဏ်ပေးနည်းအတိုင်း ကျောင်းအောက်ထပ်က ထုံးပုံ ဧရိယာမှာ အမှိုက်ကောက်ပါဆိုပြီး ဒဏ်ပေးတယ်။ အနော်တို့အကြိုက်ပေါ့ အမှိုက်ကောက်ရင်း သူတို့ရဲ့ အတွင်းရတနာ အလှအပလေးတွေ ကြည့်ရင်းပေါ့ ဂလု (အဲဒီအချိန်လေးတွေကို ပြန်ရောက်ချင်လှပါဘိ လွမ်းလိုက်တာ ကျောင်းသားဘဝရယ်)။
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရပဲဗျ ကာယအချိန်မှာ အနော်တို့ ဆရာမတို့နဲ့ ကာယကစားပြီးနောက်ပိုင်း အနော်တို့ အုပ်စုတွေ ဂေါ်လီရိုက်ကြတယ်။ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးဖို့ ဆယ်မိနယ်အလိုမှာ အနော့ ဂေါ်လီတွေလဲ ရှုံးဆိုတော့ စိတ်ညစ်လဲညစ် မောလဲမောဆိုတော့။ အတန်းထဲဝင်ပြီး ခုံပေါ်မှာ တစ်မှေးလောက်မှေးမယ်အကြံနဲ့ လှေကားအတက်မှာ လားးးးးးးးးးးလားးးးးးးးးးးးး တံခါးမကြီးဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ပေါင်နှစ်ဖက် ကားယားဖြဲလို့။သူ့ရဲ့ ပေါင်တံဖွေးဖွေးတွေကလည်း အထင်းသား ပြီးတော့ အံ့သြမှင်တက်နေပြီး အိပ်ချင်စိတ်လည်းပြေသွားတော့ အနော်လည်း အသံထွက်ချင်ပေမယ့် ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရတယ်။ ဒါကို အနောက်က ရိပ်မိသွားတဲ့ အနော့ဘော်ဒါက မထိတထိ ကလိပြီး အသံဗြဲကြီးနဲ့ လျှောက်စလို့ ကောင်မလေးက ငိုသွားပြီး ဆရာမကိုသွားတိုင်ပါလေရော။
သူ့ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ။ ကျောင်းမှာ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း ပေါင်ကပွန်းလာတော့ သူလည်း မခံနိုင်တော့ဘူး။ သူက ဆရာမကို ဘာလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲပေါ့။ ဆရာမကလည်း အနော်အထက်မှာပြောတဲ့ အတိုင်း ပေါင်ကိုကားယားဖြဲပြီး ထဘီကို အသာလေးဟပြီး လေသလပ်ထားလိုက်ပေါ့။ စပြီး လေသလပ်ခံခါစတော့ သူ့သူငယ်ချင်းက အနော်မလာခင်အထိ ကွယ်ပေးထားပါသေးတယ်။ တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းက အပေါ့သွားတဲ့အချိန်နဲ့ အနော် အတန်းထဲဝင်လာချိန်က တိုက်ဆိုင်သွားတာရယ်ပေါ့။ အဲဒီနောက်ဆက်တွဲကတော့ အနော်တို့ ဆော်လဘန်တေခံရတဲ့ အပြင် ကျောင်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာ 2နာရီတိတိ နေပူလှန်းခံရပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ဒဏ်ပေးခံရတာကတော့ ကျောင်းအားလပ်ချိန်မှာပါ အဲဒီအချိန်ကလည်း လူထုအားကစားလဆိုတော့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ကလည်း ပျင်းတယ် မျက်စိကိုအဝတ်စည်းပြီး ပြေးတမ်းလိုက်တမ်းဆော့ရအောင်ပေါ့။ ကလေးတွေပီပီ အရင်ဆုံး ရှီးရှမောခုတ်(အနော်တို့ ဒေသအခေါ်)ကြတော့ ကံကောင်းစွာပဲ အနော်အရင် ခွေးရှုးဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ လိုက်ရင်းလိုက်ရင်း မြက်ခင်းစပ်ထောင့်နားကို ရောက်လာတော့ ခဲလုံးကို ခလုတ်တိုက်ပြီး မိရာကို လှမ်းဆွဲမိတယ်။ ဆွဲမိတာက အထက်ဆင် ထဘီစကြီး။ အနော့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးက ထဘီ ကွင်းလုံးကျွတ်ကျသွားတော့ ချက်ချင်းတော့ ကောက်မဝတ်ပါဘဲနဲ့ ရှက်ပြီး ငိုပါလေရော။ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း တော်တော်ကောင်းကြတယ်။ မကူညီတဲ့ အပြင် ဝိုင်းတောင်ဟားနေကြသေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆရာမရောက်လာပြီး တစ်တန်းလုံး ခုံပေါ်တက်လို့ ထိုင်ထ အခေါက် ငါးဆယ်လုပ်လိုက်ရတယ်။အဲဒီတုန်းက အနော်တို့ အတန်းပိုင်က စိတ်လည်းကြီးသလို စည်းကမ်းလည်းကြီးတယ် အတန်းထဲမှာ အပြစ်ပေးပြီဆိုရင်လည်း ဘက်လိုက်တာတွေ ဘာတွေ မရှိဘူး(တကယ့်ကို မေ့မရခြင်းများစွာနဲ့ ကျောင်းသားဘဝ လွမ်းလိုက်တာ သယ်ချင်းတို့ရယ် )
P.s- အခုရေးတဲ့ Own ဇာတ်လမ်းကို ညစ်ညမ်းသည်ဟု မထင်စေလိုပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ အမှတ်တရ ဖြစ်ရပ်မှန် များသာဖြစ်သည်။ Comment များကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးပါမည်။
.အမှတ်တရဆိုတာ ဘာကြောင့် အမှတ်တရဖြစ်သလဲဆိုတော့..
.မမေ့နိုင် … လို့ ပေါ့ ကွယ်…
ခီညား ရဲ့ အမှတ်တရ ကလည်း…
ခါးအောက်ပိုင်းနားက မတက်ဘူး ။
ရေးပါဦး.နောက်ထပ် အမှတ်တရတွေ ရှိသေးရင်.. ဖတ်ချင်သေးလို့ …
နင်နဲ့ငါ လဗြွတ်အတိုင်း ပြိုင်လိုက်ချဉ်သေးသကွာ… ငှိငှိ
နောင်တော် အလက်ဆင်းရေ ဟိုစားရေးဆရာလို မညှာမတာ မရေးတာပဲ ကျေးဇူးအရင်တင်လိုက်ပါဦးဂျို့။ Own Tune တောင်းဆိုလာလို့ ဒီလိုတင်ပေးလိုက်တာ မျက်စိထဲမှာ Cross ဖြစ်ရင် ခွေးလွတ် အဲလေ ခွင့်လွှတ်ပါလို့
ကဲပါလေ အုန်း ဆိုတော့လည်း အုန်း ပေါ့
မေ့နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ အမှတ်တရများ ဆိုတော့လည်း………